မိုးရာသီမှာ Covid-19 အပြင် တုပ်ကွေးလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး – Suehninsi
မင်းသမီးနေခြည်ဦးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ နေခြည်ဦးဟာ အနုပညာလောကထဲကို မဝင်ရသေးခင် Beauty Blogger အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး သူမရဲ့ မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်အမြင်နဲ့ ဝတ်စားမှုတွေဟာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်စားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အနုပညာထဲကို အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အရာမဆို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ နေခြည်ဦးဟာ သူမသရုပ်ဆောင်တဲ့ ကာရိုက်တာတိုင်းအတွက် အသေးစိတ်ကအစ
သေချာ ပြင်ဆင်ကာ သရုပ်ဆောင်တတ်သူပါ.။ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ သူမလုပ်ချင်တဲ့ အရာတိုင်းကို ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကာ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြုပြင်ရင်း သူမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရဲရဲရင့်ရင့် လျှောက်လှမ်းနေသူဆိုလည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး..။ လက်ရှိ မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ရောဂါပိုးကြောင့် အိမ်မှာနေရတဲ့ အချိန်လေးမှာလည်း အကျိုးရှိအောင် နေထိုင်ကာ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို
သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မျှဝေတင်လေ့ရှိသူပါ။ ဒီနေ့ မေလ (၁၉)ရက်နေ့မှာတော့ ချီချီက “Covid19 အခြေအနေကြောင့် ကျန်းမာရေးကို အင်မတန် ဂရုစိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာ 2020 မိုးရာသီ flu ကိုလည်း ကြောက်ရတာပေါ့။ flu shot တွေဒီနှစ်အတွက် ထိုးပြီးကြပြီလား chillies ?? နေခြည်တို့ family တစ်ခုလုံးတော့ ထိုးပြီးကြပြီ၊ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်း Pyae Sone ကအခုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ဘဲ လာ
ထိုးပေးသွားတယ်။ thank you so much sharing is caring ပါ chillies ..” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ မိုးရာသီလည်း ရောက်လာပြီမို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသလို ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ညွှန်ပေးနေတဲ့ နေခြည်ဦးကို အားပေးချစ်ခင် ရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်.။
မငျးသမီးနခွေညျဦးကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ နခွေညျဦးဟာ အနုပညာလောကထဲကို မဝငျရသေးခငျ Beauty Blogger အနနေဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိခဲ့ပွီး သူမရဲ့ မိမိုကျလှနျးတဲ့ ဖကျရှငျအမွငျနဲ့ ဝတျစားမှုတှဟော မိနျးကလေး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျစားတဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ.။ အနုပညာထဲကို အသဈတဈယောကျအနနေဲ့ ရောကျရှိခဲ့ပမေယျ့ ဘယျအရာမဆို ကွိုးစားလုပျဆောငျတတျတဲ့ နခွေညျဦးဟာ သူမသရုပျဆောငျတဲ့ ကာရိုကျတာတိုငျးအတှကျ အသေးစိတျကအစ
သခြော ပွငျဆငျကာ သရုပျဆောငျတတျသူပါ.။ အမွဲတမျး ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့နဲ့ သူမလုပျခငျြတဲ့ အရာတိုငျးကို ဖွဈအောငျ ကွိုးစားကာ ဝဖေနျမှုတှကေို ပွုပွငျရငျး သူမခဈြတဲ့ပရိသတျတှနေဲ့အတူ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကို ရဲရဲရငျ့ရငျ့ လြှောကျလှမျးနသေူဆိုလညျး မှားမယျ မထငျပါဘူး..။ လကျရှိ မှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ရောဂါပိုးကွောငျ့ အိမျမှာနရေတဲ့ အခြိနျလေးမှာလညျး အကြိုးရှိအောငျ နထေိုငျကာ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ လုပျဆောငျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို
သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ မြှဝတေငျလရှေိ့သူပါ။ ဒီနေ့ မလေ (၁၉)ရကျနမှေ့ာတော့ ခြီခြီက “Covid19 အခွအေနကွေောငျ့ ကနျြးမာရေးကို အငျမတနျ ဂရုစိုကျနရေတဲ့အခြိနျမှာ 2020 မိုးရာသီ flu ကိုလညျး ကွောကျရတာပေါ့။ flu shot တှဒေီနှဈအတှကျ ထိုးပွီးကွပွီလား chillies ?? နခွေညျတို့ family တဈခုလုံးတော့ ထိုးပွီးကွပွီ၊ ကြောငျးနဘေကျသူငယျခငျြး Pyae Sone ကအခုဆရာဝနျကွီးဖွဈနပွေီဆိုတော့ သူကိုယျတိုငျဘဲ လာ
ထိုးပေးသှားတယျ။ thank you so much sharing is caring ပါ chillies ..” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ မိုးရာသီလညျး ရောကျလာပွီမို့ ကိုယျတိုငျလညျး တုပျကှေး ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးသလို ပရိသတျတှအေတှကျလညျး ကာကှယျဆေးထိုးကွဖို့ တိုကျတှနျးထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးလညျး ပရိသတျတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးတှကေိုသာ ညှနျပေးနတေဲ့ နခွေညျဦးကို အားပေးခဈြခငျ ရငျ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ပါဦးနျော.။